IZIHLANGU EZI-5 EZIBALEKAYO ZOKUTYALA IPLANTAR FASCIITIS 2021, NGEPODIATRISTS NGANYE - UMSEBENZI WOKUSEBENZA
Izihlangu ezi-5 ezibalekayo zePlantar Fasciitis ngoku kwaye ngo-2021, ngokukaPodiatrists
I-ASICS / Brooks / Ibhalansi eNtsha
Njengokusebenza nje komzimba okuhle, kunokuthatha umthwalo omkhulu kwiinyawo zakho. Ngapha koko, ayiqhelekanga kubagijimi abaninzi ukuba babone i-fasciitis yesityalo-uhlobo lwe intlungu yonyawo oko kwenzeka xa ibhanti yethishu edibanisa ithambo lesithende neenzwane zakho idumbile-kuba izithende zakho kunye neerandi zithatha ifuthe elininzi. Ke xa ukhetha izihlangu ezifanelekileyo zokubaleka kwintlungu ye-fasciitis yehla, kuyehla kuzinzo kunye nenkxaso.
Ungazithengela njani izihlangu ezibalekayo ze-plantar fasciitis
Oogqirha beenyawo bavuma ukuba i-hybrid phakathi kweziteki ezilawulwa sisindululo ezinempawu zozinzo kunye nenkxaso ye-arch yindlela yokuhamba. Nazi izinto ezikumgangatho ophezulu ekufuneka uzigcine engqondweni:
Ukuphendula ngokudibeneyo kunye nenkxaso ye-arch kubalulekile, kodwa ukunceda kakhulu kunokubuyisela umlilo ngokunikezela kakhulu, kwaye ke, ngenkxaso eyoneleyo, uyachaza uJonathan Rouse, DPM, ugqirha wezilwanyana osekwe eChicago kunye nosomlomo Umbutho wezonyango waseMelika .
Izithuba eziphakathi kunye nenkxaso ye-midsole ukunceda ukunciphisa umda wobizo. Oku kuluncedo ngakumbi kubantu abaneenyawo ezibhedayo abafuna ulawulo ngakumbi xa bebaleka, utshilo uJacqueline Sutera, DPM, ugqirha weenyawo IsiXeko sePodiatry kwisiXeko saseNew York.
Ukuqinisa ukuphendula unyawo lonke -Hayi isithende kunye neenyawo zangaphambili-ukunceda ukufumanisa umothuko.
Ii-insoles ezisusekayo ukuze ungeze ii-orthotic zakho. Uninzi lwezihlangu ezibalekayo luza nazo insoles ezibonelela ngenkxaso ye-arch, kodwa licebo elihle ukubakhupha kwaye ubavavanye. 'Ukuba zibhityile kwaye zithe tyaba, zinokubuyiselwa endaweni yazo ngesixhobo esixhasayo okanye isiko elibunjiweyo elenziwe ngugqirha wezifo zamehlo, utshilo uGqirha Sutera.
Ibhokisi yeenzwane ezinqabileyo Ibanzi ngokwaneleyo ukuba uvumele iinzwane zakho kunye neenyawo zangaphambili zihlale tyaba ngaphandle kokuxinana okanye ukuqiniswa, utshilo uGqirha Sutera.
Izinto eziqinileyo kwi-arch. Inokuba yiyo nantoni na ukusuka kwi-kevlar ukuya kwisiqwenga seplastiki, kodwa ukuba inenkxaso, kufanele ukuba incede nge-fasciitis yesityalo, utshilo uGqirha Rouse. Ugqirha Sutera wongeza ukuba uyilo oluthile kwiziteki zindlela ezifihliweyo zeempawu zezihlangu zongeza inkxaso yeenyawo. 'Imigca kunye nemivimbo oye uyibone ngamanye amaxesha kwiziteki, ngakumbi emacaleni, inceda ukunciphisa ukubhengezwa ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, utshilo. Ukuba ufuna inkxaso engaphezulu kwaye uthe tyaba iinyawo, uGqr Sutera ucebisa ukuba ukhethe izihlangu ezinemitya enemilenze eshinyeneyo ethungelwe emacaleni kulawulo olungaphezulu.
Nje ukuba ufumane izihlangu ezibalekayo nezi zinto, zizame ngaphambi kokuthenga, ngakumbi ukuphela kosuku xa yakho iinyawo zidumbile . Ngaba bayenzakalisa? Ngaba baphila kamnandi? Ngaba ziyaphefumla? Ngaba banikezela ngokwaneleyo kunye nenkxaso? Ukuba izihlangu azive zintle evenkileni, azizukuziva zilungile kamva. Izihlangu akufuneki zibe 'nexesha lokungena' ngaphambi kokuba zikhululeke, utshilo uGqirha Rouse.
Ngoku ukuba uyazi iziseko, Nazi ezona zihlangu zibalekayo zentlungu ye-fasciitis yokujonga:
Ezi zihlangu zibalekayo zakhiwe ngokusayinwa kwe-ASICS, ebonelela ngenkxaso yezithende kunye nozinzo. Ziyilelwe nge-midsole ephendulayo ukuze ikunike inani elifanelekileyo lokunikwa, okuthetha ukuba utshintsho olugudileyo phakathi kwamanyathelo. 'Esi sihlangu inolawulo olukhulu lweenyawo ezingasemva, ethintela ukugqithisa ngaphezulu, Unobangela we-fasciitis yesityalo, utshilo uGqirha Rouse. Ukuba kunjalo iinyawo ezicaba , olu lukhetho olukhulu. Yongeze inkxaso yonyawo lwangaphambili kunye ne-back yangasemva enentwasahlobo, eza kuthatha uxinzelelo kunyawo, utshilo.
2Ixabiso elifanelekileyoI-940v4 izihlangu ezibalekayo Ibhalansi eNtsha Ibhalansi eNtsha zappos.com$ 129.95 THENGA NGOKU
Njengokushicilelwa kwamanqwanqwa okulawula ukunyakaza kwi-Balance New lineup, ezi zihlangu ziya kukunika intwasahlobo kwimigudu yakho. Uyakufumana izithuba eziphakathi ezixineneyo ukubonelela ngolwakhiwo nozinzo , ebenza babe lukhetho olufanelekileyo kubaxhasi abangaphezulu. Zikwabonisa ukugcwala kweenyawo zonke kunye noxinzelelo lokucinezelwa okunceda ukukhusela iinzwane kwimpembelelo. 'Esi sihlangu sinesithuba esine-dense, esivumela isixa esikhulu senkxaso kwisityalo se-fascia, utshilo uGqirha Rouse.
3Izihlangu ezibalekayo ezihamba manziGhost 12 GTX izihlangu ezibalekayo Imifula Imifula imvucrand.com$ 160.00 THENGA NGOKU
Ukuba ungumlandeli wendlela ebalekayo, le nguqulo ye-Brooks eyaziwayo ye-Ghost 12s iya kugcina iinyawo zakho zomile kwaye zipholile ngexesha leemvula, neentsuku ezinodaka. Ukuphendula kwe-DNA phantsi kwenyawo ibonelela ngokufika okuthambileyo ngomgama ngamnye , kunye neepads zokudibanisa ezidityanisiweyo ngaphambili zinceda ukufunxa ukothuka. 'Ezi zinenkxaso yearch engqongqo kancinci kodwa zilungile kwi-plantar fasciitis, utshilo uGqirha Rouse.
4Eyona ilungileyo yokubaleka umgama omdeI-860v10 i-NYC iMbaleki yokubaleka izihlangu Ibhalansi eNtsha Ibhalansi eNtsha newbalance.com$ 144.99 THENGA NGOKU
Yenzelwe ukubhiyozela iMarathon ye-NYC, ezi sneakers zenzelwe iimbaleki ezinde. Ukuphendula okuphendulayo kwi-midsoles ukuya Silungile ngokusebenza kwamandla ukuze uhambe umgama , ngelixa iiposti-zolawulo lwezithuba zangaphakathi zithintela iinyawo zakho ekubeni zigqithise. Ugqirha Rouse uthi 'banikezela ngenkxaso enkulu kwi-midfoot njengoko inesithuba esiphakathi kwisithende sangaphandle.' Uyongeza: 'Oku kuyakubangela ubunzima obuncinci kwi-plantar fascia, ngaloo ndlela kunciphisa ukudumba kunye nentlungu.'
5 I-Glycerin 17 yezihlangu ezibalekayo Imifula Imifula imvucrand.com$ 150,00 THENGA NGOKU
Ukuba ukhangela izihlangu ezibalekayo ezinikezela ngenkxaso, efana neekawusi, ezi zibhanti zezakho. Umnatha ophezulu oguquguqukayo nophefumlayo uphefumla kamnandi kodwa unika iinzwane zakho indawo yokuphefumla. Ziyilelwe nge-Brooks's DNA LOFT yokuqinisa oko ibonelela ngenkxaso kwiziseko ezingaphantsi kweenyawo kunye neplascia yefarcia Utshilo uGqr. Rouse, enika ukothuka kulo lonke unyawo. 'Oku kuvumela imikhosi ukuba isasaze ngokulinganayo kwaye ithathe imikhosi eyongezelelweyo ishiye i-fascia yesityalo, utshilo.
okona kutya kugungqiselayo kwabasetyhini
Yonke into inuka ngokufanayo emva komdumba